Lifesize Uurka Dumarka Uurka Leh ee caruusadaha iibka ah
Ubadka Ugu Fiican Dolls Iibinta Tayo Sare
Haddii aad ku riyooneyso xiriir galmo gacan ka hadal ah oo lala yeesho haween uur leh, tani waa janadaada. Caruusadaha uurka halkan waxay qancin karaan rabitaanka aabbahaa. Waxay umuuqdaan inay uur leeyihiin bilo yar, wayna cayilanyihiin waxayna miskaha iyo lugaha ka balaaranyihiin hadaad jeceshahay naag uur leh oo qaabeysan. Hooyooyinkan uurka leh ayaa dabooli kara baahiyahaaga. Waxay badanaa xirtaan dharka ugu caatada ah si ay u muujiyaan calooshooda wareega. Tani waa nooc sharaf ah.
D Cup Naasaha Yu Xuan 160CM TPE Japan Jinsiga Doll Qofka Weyn ee Weyn ee Caloosha Haweenka Uurka leh
Naag Uur Leh Iskaashatada Dadka Waaweyn ee Caloosha ah 160CM Wide Ass Dam Yar oo Laab TPE Doll Adam Harrington
Ubadka Galmada Uurka ee Rakhiiska